के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? – Sandesh Press
June 29, 2021 269
काठमाण्डूको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स लिनका लागि दैनिक ७०० देखि १,००० को हाराहारीमा मानिसहरू लाइन बस्ने गरेको कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी उपेन्द्र शाह बताउँछन्। “हामीले दैनिक ४०० जनालाई टोकन दिने गरेका छौँ। तर कार्यालय खुल्नुअगाडि नै कहिले ७०० त कहिले १,००० जना लाइन बसिसकेका हुन्छन्।
Prevजुलाईमा ४ ग्रहहरुले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्दै , कस्तो रहला प्रभाव ?
Nextरिहाई पछी प्रहरी चौकी अगाडीबाट नै सपनाले भनिन – ‘मलाई पुरुष प्रहरीले छातीमा हात लगायो’ (भिडियो)
गण्डकी, लुम्बिनीसहित यी ४ प्रदेशमा आज ‘भारी वर्षा’ हुने